विवाहित किरणको प्रेम अनुपम खेरसंग कसरी भयो ? अनुपम पनि थिए विवाहित !!
एजेन्सी । ५०० भन्दा बढी बलिउड फिल्ममा काम गरिसकेका अनुपम खेरले उद्योगमा आफ्नो करियर बनाउन निकै संघर्ष गरे । यति धेरै संघर्ष पछि, उनले आफ्नो नाम उद्योग को एक उत्कृष्ट अभिनेता बनाउन सफल भए। अनुपम खेरले आज आफ्नो ६७ औं जन्मदिन मनाइरहेका छन् र यस अवसरमा हामी तपाईंलाई उनको र किरण खेरको प्रेमकथाको बारेमा बताउन गइरहेका छौं। बलिउडको सदाबहार जोडीको रुपमा परिचित अनुपम खेर र किरण खेरको कथा कुनै फिल्मको कथाभन्दा कम छैन ।
यसरी नै पहिलो भेट भयो :दुवैको पहिलो भेट चण्डीगढमा भएको थियो, जहाँ दुवै चण्डीगढ थिएटर ग्रुपको हिस्सा थिए। अनुपम खेर र किरणको निकै गहिरो मित्रता थियो, दुवैले एकअर्कासँग आफ्नो सुख दुख बाँड्ने गर्थे । अनुपम र किरण विभिन्न नाटकका कारण सँगै घुम्ने गर्दथे, जसका कारण उनीहरु निकै मिल्ने साथी बनेका थिए । तर उनीहरुलाई थाहा थिएन कि उनीहरुको मित्रता एक दिन प्रेममा परिणत हुनेछ।
पहिले नै विवाहित थिए :किरण र अनुपम खेर एकअर्काको प्रेममा पर्नु अघि विवाहित थिए। अनुपमले सन् १९७९ मा विवाह गरेका थिए तर उनी यस सम्बन्धमा खुसी थिएनन् । किरणको विवाह मुम्बईका व्यापारी गौतम बेरीसँग सन् १९८० मा भएको थियो, जुन पाँच वर्ष मात्र टिकेको थियो। यो विवाहबाट किरणको एउटा छोरा पनि जन्मियो जसको नाम सिकन्दर हो ।
यस्तो माया महसुस भयो :यी दुवै कलाकार आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कठिन चरणबाट गुज्रिरहेका थिए । यसबाहेक दुबैमा अभिनयको उत्तिकै पागलपन थियो, जसका कारण उनीहरुको मित्रता प्रेममा परिणत भयो । अनुपम खेर पहिले सामान्य जीवनमा लजालु केटा थिए तर किरणको लागि हिम्मत गर्दै उनले किरणलाई आफ्नो भावना सुनाए र उनलाई प्रस्ताव गरे, त्यसपछि किरणले उनलाई अस्वीकार गर्न सकिनन्।
अनुपम खेर र किरण दुवै पूर्णतया फरक पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। दुवैले सन् १९८५ मा आ–आफ्ना पार्टनरसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि विवाह गरेका थिए । यो विवाह एक निजी विवाह थियो, जुन गुडगाउँमा भएको थियो। यो विवाहमा उनीहरुको परिवार र रंगमञ्चसँग जोडिएका साथीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
विवाह पछि जीवन :उनीहरुको वैवाहिक जीवनको शुरुवाती दिनहरु निकै रमाइलो थिए । किरण र सिकन्दर अनुपमलाई उनको छायाँकनमा साथ दिने गर्थे । तर अन्य बिवाह जस्तै उनीहरुको वैवाहिक जीवनमा पनि धेरै उतारचढाव आए । जब अनुपम खेर निर्माता बने तब उनले उद्योगमा धेरै मानिसहरुबाट ऋण लिए, जसका कारण आर्थिक समस्या आउन थाल्यो । यही समयमा किरण उनको पतिको बल बनिन् र उनले बलिउडमा काम गर्न थालिन् । यो जोडीले आफ्नो जीवनमा धेरै समस्याको सामना गरे तर दुवैले एकअर्काको साथ कहिल्यै छोडेनन्। सायद यसैलाई साँचो माया भनिन्छ।
२०७८ फाल्गुन २४, मंगलवार प्रकाशित0Minutes 140 Views